Xaalada Ogadeniya oo Kasii daraysa iyo Faahin Dheeraad ah | ogaden24
Xaalada Ogadeniya oo Kasii daraysa iyo Faahin Dheeraad ah
Aug 8, 2018 - Aragtiyood
Waxaa wali guud ahaan wadanka Ogaadeeniya ee gacanta gumaysiga kujira kasocda dhibaatooyin lixaad leh oo ay sababeen ciidamada Gumaysiga Itoobiya oo faragalin ciidan oo qaawan kuqaaday dhamaan wadanka Ogaadeeniya.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa magaalooyinka Dirdhebe iyo Jigjiga kudhintay dad shacab ah oo aad ubadan halka dhaawucuna uu tiro beelay, waxaana lagusoo waramayaa in ay jiraan iska hor imaadyo dhex maraya ciidamada Gumaysiga Itoobiya iyo dadka shacabka ah ee Soomaalida Ogaadeeniya.
Dhinaca kale waxaa magaalooyinka Dirdhebe iyo Jigjiga laga soo sheegayaa qax aad ubalaadhan kaas oo inta taariikhda laxasuusto aan wali deegaanadaas lagu arag, waxaana lasheegayaa in shacabku ay ukala yaaceen Gobolada Ogaadeeniya iyo waliba wadanka Djabuuti oo dad badani uu halkaas kajoogay.
Ciidamada Gumaysiga Itoobiya ee faragalinta qaawan kusamaysay wadanka Ogaadeeniya ayaa lasheegayaa in ay sitoos ah udifaacayaan dadka Itoobiyaanka ah ee kudhaqan Gobolada wadanka kuwaas oo iyaguna weeraro ugaystay dadka shacabka ah ee Soomaalida ah ee dhulkoodii jooga.
Shacabka Soomaalida ah ee Ogaadeeniya kudhaqan oo awalba ogaa in lagumaysto ayaa ogaaday colaada looqabo iyo sida ay xukuumada Itoobiya iyo shacabkeeduba weerar ugu yihiin dhulkooda iyo karaamadooda.
Dhinaca kale waxaa arin murugo leh laga soo sheegayaa dhaawacyada yaala Isbitaalada Jigjiga iyo Dirdhebe halkaas oo sida lasheegay laga waayay adeegii lagu caawin lahaa dadka dhaawaca ah, waxaana dadka dhaawaca ah lawaayay meel kale oo loola cararo maadaama oo lajoojiyay duulimaadkii dayuuradaha ee Ogaadeeniya iyo Itoobiya. Taas oo xaalada dhaawac yada uga siidartay.